रातो रङले रंगिदाका दुःख – जागरण अनलाइन
२०७५ कार्तिक २७, मंगलवार २१:४९ मा प्रकाशित
मलाई मन पनेर् रङ रातो  । त्यही रातो रङले म महिनामा पाच दिन रंगिन हुन्छु । तर ती पाच दिन मे रा लागि कठिन बन्छन् । म भान्सा को ठामा गइ परिवारसगै बसी खाना खान सक्दिन । बुवासग बस्न पाउदिन । मन लागे को काम गर्न पाउदिन । उता नजाऊ, यता नआऊ छो इन्छ । यस् तै –यस्तै शब्दले यी पाच दिन किन आउछन् जस्तो लाग्छ । यस् तै समस् यामा म जस् तै सबै महिला र किशो री बा“चिरहे का छौ ं । परम्पराका नाममा यो हिंसाको रुपलाई हामीले झे लिरहे का छौ ं ।
एउटी बालिका जब किशो रावस् थामा प्रवे श गर्छिन्, उनमा शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुन थाल्छन् । जसमध्ये महिनावारी प्रमुख शारीरिक परिवर्तन हो  । प्रत्ये क महिनाको २८/२८ दिनको नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया जसले एउटी महिलालाई मातृत्वका लागि
आधार प्रदान गर्छ । तर हाम्रो समाजमा धर्म, संस् कार, सामाजिक नियम तथा परम्पराका नाममा ‘नछुने ’ जस् तो शब्दका साथै मानसिकरुपमा पीडा दिने व्यवहार गनेर् र गराउने गरिन्छ ।
महिनावारी भएको समयमा भान्सामा जान नहुने , पानी छुन नहुने , पुरुषस“ग छो इन नहुने , फलफूल तथा तरकारीका बिरुवा छुन नहुने , दूध दही छुन नहुने , पूजा गर्न नहुने , मन्दिर जान नहुने , शुभकार्यमा सहभागी नहुने जस् ता बर्जित गरिएका थुप्रै व्यवहारहरु छन् । त्यसै गरी पहिलो महिनावारी हु“दा पा“च दिन कुनामा लुक्नुपनेर् घाम तथा पुरुषको मुख हे र्न नहुने , महिनावारीभन्दा अघि बालिकालाई कुना राख्ने आदि जस् ता चलन पनि यथावत नै छन् । महिनावारी एक प्राकृतिक नियम हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी समाजका यस् ता गलत व्यवहारहरुलाई स् वीकारिरहे का छौ ं  । ने पालका के ही जिल्लाहरुमा छाउपडी जस् ता कुप्रथा रहे को छ भने सुगम र शिक्षित क्षे त्रमा पनि यसको अंशका रुपमा ‘नछुने ’ प्रथा रहे को छ ।
विशे षगरी चे तनाको कमी भएका क्षे त्रमा यस् तो व्यवहार धे रै रहे पनि शहरी क्षे त्रका शिक्षित बर्ग पनि अछुतो दे खिदै न । समय र समाजको परिस् िथति अनुसार प्राचीन समाजले तत्कालीन समाज अनुकूल महिनावारीबारे व्यवहारहरु बनायो जुन अब समय अनुसार परिवर्तित हुन जरुरी छ । प्राचीन समयमा महिनावारी हु“दा बग्ने रगतलाई उचितरुपमा व्यवस् थापन गनेर् साधनको विकास तथा पर्याप्तता थिएन जसले गर्दा रगत नियन्त्रण नभई महिलालाई काम गर्न कठिन हुने भएकाले ‘नछुने ’ नियम बनाएको पाइन्छ । महिलाले पुरुषको तुलनामा धे रै काम गर्नुपनेर् बाध्यता र कामबाट आराम पनि गर्न नपाउने अवस् थामा महिनावारीलाई आराम गनेर् समयका रुपमा लिएको बुझिन्छ ।
त्यसै गरी पहिले –पहिले मन्दिर धे रै टाढा हुने र जंगलको बाटो भइ जानुपनेर् हुन्थ्यो  । महिनावारीको समयमा शरीरबाट ताजा रगत बग्ने र जुन जनावरले गन्ध पाई महिलालाई आक्रमण गनेर् जो खिम रहन्थ्यो  । त्यसकारण महिनावारीको समयमा मन्दिर जान निषे ध गरिएको दे खिन्छ । यसरी प्राचीन समाजको अवस् था अनुसार महिनावारीसम्बन्धी विभिन्न नियमहरु बनाएको पाइन्छ ।
प्राचीन समाजमा महिलाको भूमिका सीमित थियो  । महिलाहरु निश्चित घे राभित्र बा“धिएका थिए । तर अहिले महिलाको दायरा फराकिलो भएको छ । महिलाहरु घरधन्दामा सीमित नभई पुरुषसग समान काममा सहभागी भएका छन् । समाज बदलिएको छ । बदलिदो समाजसगै महिलाका भूमिका र जिम्मे वारी बढे का छन् । यस् तो अवस्थामा प्रत्ये क महिना हुने महिनावारीलाई ‘छुन नहुने ’ समयका रुपमा प्रयो ग गर्नु र गराउनु कति सान्दर्भिक हो ला ? यो बारे मा गम्भीर भइ सो च्नु आवश्यक छ । महिलाहरु आफै पनि सचे त हुन अझ बढी जरुरी छ । वर्तमान समयमा महिनावारी हु“दा पानीको मुहान नछुने , भान्साको काम नगनेर् जस्ता चलनहरुमा हामी महिलाहरु अल्झिएका छौ ं ।
हामीमध्ये कति त महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि महिनाका ती पाच दिनलाई ‘नछुने ’ दिनका रुपमा लिइरहे का छौ ं भने कतिपयले अरुबाट तिरस् कृत भइने डरले ‘नबानेर् ’ कुरा खुले र भन्न सकिरहे का हु“दै नौ ं । अरुले के भन्नलान् भन्ने लाज र डरले हो स् वा जे जसरी भए पनि हामी अझै पनि परम्परावादी सो चबाट माथि उठ्न सकिरहे का छै नौ ं । महिनावारीलाई पापसग जो डी पञ्चमी पूजा गनेर् , महिनावारी भएका महिलासग छो इए जनै फे नेर् , सुनपानी छकेर् र चो खो हुने जस् ता चलन हामीबाट अझै पनि हट्न सके का छै नन् । त्यति मात्र हो इन, विशे ष अवसर वा चाडपर्वहरुमा महिनावारी भएमा ती कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन बर्जित भएकाले े कतिपय महिलाहरुले महिनावारीलाई पर सार्नका लागि विभिन्न हो मोर् नयुक्त औ षधिको से वन गनेर् गरे को पाइन्छ । ती औ षधिको अधिक प्रयो ग हु“दा पर्न जाने असरका बारे मा जाने र वा नजाने र नै हामी महिलाहरू ती औ षधि प्रयो ग गर्न बाध्य छौ ं । त्यस्ता औ षधिको प्रयो ग विशे षगरी शिक्षित महिला तथा शहरी क्षे त्रमा नै अधिक हुने गरे को पाइन्छ ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिमका के ही ठाउहरुमा महिनावारी हुदा घर बाहिर छाउगो ठमा बस् नुपनेर् बाध्यता दे खिन्छ भने महिनावारी चलिरहे को समयमा किशो री र शिक्षिका विद्यालय जानबाट बञ्चित हुन्छन् ।
यसरी शिक्षिका र किशो री हरे क महिना पाच दिन विद्यालय नजादा अध्ययन अध्यापनमा कस् तो असर पर्छ हो ला ? छाउगो ठमा बस्दा महिलाको मानसिक र शारीरिक अवस् था बिग्रन्छ । महिनावारीको समयमा शरीरबाट बग्ने रगत शुद्ध र ताजा हुन्छ । त्यो समयमा शरीरलाई पौ ष्टिक आहराका साथै सरसफाइको पनि त्यत्तिकै महत्व रहन्छ । तर ती पाच दिन छाउगो ठमा बिताउ“दा ती दिन के स्वस्वस्थ बन्न सक्छन् त ? त्यति मात्र नभई महिला र किशो री बलात्कारका शिकार हुने गरे का छन् । कतिपयले त मृत्युवरणसमे त गरे का छन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐ न, २०७४ मा महिनावारीका आधारमा विभे द गनेर् कुरालाई निषे ध गरिएको छ । ऐ नको दफा १६८ मा अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसै ले कसै लाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस् था छ । उपदफा (३) मा महिलाको रजस् वला वा सुत्के रीको अवस् थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस् तै अन्य कुनै किसिमका भे दभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हु“दै न भन्ने उल्ले ख छ । उपदफा (४) मा यस् तो कसूर गनेर् व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कै द वा तीन हजार रुपै या“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस् था छ । उपदफा (५) मा राष्ट्रसे वकले यस् तो कसुर गरे मा निजलाई थप तीन महिनासम्म कै द सजाय हुने उल्ले ख छ ।
यसरी कानूनले निषे ध गरे का कुरा पनि हाम्रो समाजमा सहजरुपमा भइरहे का छन् । महिनावारीका समयमा गरिने यस् ता विभे दपूर्ण व्यवहारले महिलालाई शारीरिक र मानसिकरुपमा नजानिदो तरीकाले बिक्षिप्त बनाउदै गएको छ भने महिलाका दै निक काम र जिम्मे वारीमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बनाएको छ । महिनावारीलाई हे नेर् र बुझ्ने तरीका सकारात्मक नहुदा हाम्रा किशो रीहरु महिनावारी हुनुलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिन्छन् । घर, विद्यालय तथा समाजमा गरिने व्यवहारले महिनावारी हुन नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने गुनासो पनि गरे को दे खिन्छ । महिनावारीलाई जबसम्म मर्यादित बनाउन सकिदै न तबसम्म यस्ता व्यवहार र गुनासाहरु हट्न सक्दै नन् । तपाइ एकपटक सम्झनुहो स् त महिनावारी सम्बन्धी भएका परम्पराका कारण तपाइले कुनै महत्वपूर्ण कार्य वा अवसर छुटाउनुभएको छ कि ? पक्कै पनि छुटाउनुभएको छ र ती अवसर गुम्दा मानसिकरुपमा बिक्षिप्त पनि हुनुभएको हो ला । त्यस्तै महिनावारी भएको समयमा तपाइ“को परिवारले समयमै खाना पाएको छ ? दै निकी सहजरुपमा सञ्चालित हुन्छ ? पहिलो महिनवारी हुदा किशो रीले ती पाच दिन घामको मुख नहे री लुके र बस्दा उसको मानसिक तथा शारीरिक स् वास् थ्यका साथै दै निक गरिने काममा कति असर पर्छ हो ला ? अरु दिन घरकी रानी भनिने महिलाले ती दिनमा छो एको पानी नखादा वा पानी नछो ऊ भन्दा कस्तो लाग्छ हो ला ? एकपटक सो च्ने हो कि ?
महिनावारी भएका कारणले कुनै पनि महिला र किशो रीले विभे द भो ग्नु नपरो स् । कुनै अवसरबाट बञ्चित हुन नपरो स् । यसका लागि घर, समाज, विद्यालय र राष्ट्रले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन पहल थाल्नुपर्छ । शुरुवात भने आफूबाटै गर्नुपर्छ । म महिनावारीलाई प्राकृतिक नियम भनी सहर्ष स् वीकार्छु र यसस“ग सम्बन्धित गलत व्यवहार अपनाउने छै न भनी आफै स“ग किशो रीले सर्वप्रथम प्रण लिनुपर्छ । यसका लागि आमा बाबुले आफ्ना हुर्कदै गरे का किशो र किशो रीलाई महिनावारी वास् तविक प्रक्रिया बताएर सहयो ग गर्नुपर्छ भने घरमा महिनावारीसम्बन्धी गलत व्यबहार सिकाउनु हुदै न । विद्यालयमा तहगतरुपमा महिनावारीसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छ साथै विद्यालय तथा कार्यालयमा महिलामै त्री शौ चालयको ब्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने कार्यमा सबै क्षे त्र, तह र ब्यक्तिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पहिले दे खि चलिआएको चलन परिवर्तन गर्न के ही बाधा त अवश्य हुन्छ तर परिवर्तन गनेर् इच्छाशक्ति र सहयो ग भएमा असम्भव छै न । यो परिवर्तनलाई म तपाइ अनि हामी सबै को आवश्यक छ । अझ पुरुषको सहयो ग त झन् धे रै छ । मे रो सपना छ अब हरे क महिला र किशो रीले निर्धक्कसग महिनावारी भएको छु भन्न सकून् । ती रातो रङले रंगीन भएका दिन दुखद् नबनून् । रातो रङले रंगिनुलाई अभिशाप नभइ अवसरका रुपमा लिउन् । अनि किशो रीले भन्न सकून्– म महिनावारी भएकी छु, म रातो रङले रंगिएकी छु ।
दाङमा आशा लाग्दो ‘विकास’ २०७५ कार्तिक २७, मंगलवार २१:४९
निरन्जन थापाकाे विचार- युवा नेतृत्वका लागि कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्छ २०७५ कार्तिक २७, मंगलवार २१:४९
ब्यवसायी प्रती राज्यको उत्तरदायित्व जरुरी छ २०७५ कार्तिक २७, मंगलवार २१:४९